INDLU YEKOLONI PHAKATHI KWEPAKA NOLWANDLE
ULionel ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-92% yeendwendwe zakutshanje.
Indlu enkulu phakathi kohlaza oluchumileyo. Imarike yoononkala, iindawo zokutyela kunye nolwandle zingaphantsi kwemizuzu eli-10 ngesikuta. Ekuseni, isidlo sakusasa sinikezelwa phambi kwechibi. Ngorhatya, ukutshona kwelanga okubonwa kwithafa leplanga kuhle kakhulu. Ukuzola, ukuzola okuzolileyo kuya kwenza ukuhlala kwakho kube lixesha elimnandi nokuba usisibini, usapho okanye abahlobo. Kwenye yee-suites itafile kunye nezihlalo zivumela ukuba zifake indawo yokusebenza
Ii-suites zixhotyiswe ngeebhedi zeKing Size, i-air conditioning kunye nefeni ukunika abahlali ukukhetha. I-1 ibhedi eyongezelelweyo inokulungiswa kwii-2 zamagumbi, kubantwana, ukuzisa umthamo ophezulu kwi-8. Kubantu abaninzi "i-BIG HOUSE" kufuneka iqeshwe.
Kwigumbi lokuhlala ufumana indawo yebar enefriji, iketile, indawo ekhuselekileyo, kunye nemidlalo yebhodi.
Kukho i-intanethi. Idama liyityuwa. Ukuze kugcinwe imo engqongileyo isifudumezi samanzi sisifudumezi selanga, nangona kunjalo kukwakho nesifudumezi samanzi sombane esidluliselwe ukuthuthuzela kwabahlali xa kukho imozulu embi.
Ukuzola kodwa kufutshane nePaki yeNdalo, iMarike yeCrab kunye neKep Beach.
Ngalo lonke ixesha lokuhlala, isibini sabalindi sinyamekela ipropati kunye nedama lokuqubha. Indlu, iibhedi kunye nesidlo sakusasa balungiswa ngabo, kodwa ababoneleli zitya zezinye izidlo. Bahlala bencumile kwaye beluncedo. Sikwahlala sifumaneka kwiindwendwe zethu ukuba kuyimfuneko. Kunokwenzeka ukuba ukutya kuhanjiswe kwi-villa. Ekhaya uya kufumana incwadana enalo lonke ulwazi oluyimfuneko.
Ngalo lonke ixesha lokuhlala, isibini sabalindi sinyamekela ipropati kunye nedama lokuqubha. Indlu, iibhedi kunye nesidlo sakusasa balungiswa ngabo, kodwa ababoneleli zitya zezinye…